Farmaajo oo casho u sameeyay Murashaxiinta Madaxweynaha Somalia [Sawirro] | Waayaha
You are here: Home 2017 February Farmaajo oo casho u sameeyay Murashaxiinta Madaxweynaha Somalia [Sawirro]
Inkastoo saxaafaddu dibadda ka joogtay cashadaas, hadana wararka warsidaha WN soo gaaraya ayaa sheegaya in xubnahaas kawada hadleen sidii horay loogu sii socon lahaa islamarkaana loo oofin lahaa in dalku yeesho xukuumad tayo leh oo wax ka qabata amniga, abaaraha iyo dib u hishiisiinta.
Mudane Farmaajo oo howlo badan horyaallaan ayaa laga sugayaa in caleemo saarkiisa kadib soo magacaabo Ra’isal wasaaraha dalka oo ay suxul duub ugu jiraan beelaha Hawiye.
Warar hoose ayaa tibaaxaya in qaar kamid ah beelaha ugu tunka weyn ee saamaynta kuleh siyaasadda loollan ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen kursiga labaad ee dalka.
Tallaabadan ayaa noqonaysa caqabada ka hor imaan karta mudane Farmajo.
2012 doorashadii Xasan Sheekh ayaa la xasuustaa waqtigii uu lumiyay si uu usoo magacaabo Ra’isal wasaare taasoo loo aanaynayay cadaadis kaga imaanayay dhinaca qabaa’ilka iyadoo nidaamka hadda Somalia wax ku maamusho uu ku salaysanyahay 4.5.